Mileage kanye stop
A ibanga endleleni Sevastopol-Krasnodar emgceni locondzile impela kancane - 432 amakhilomitha. Kodwa eqinisweni, udinga ukushayela kabili - 969 amakhilomitha. Le ndlela kuzothatha cishe 13 amahora. Umzila Krasnodar - Sevastopol egcina Bakhchisarai, Simferopol bese Feodosia futhi Kerch sihamba, bese ejika esikhaleni nje ibe echwebeni "eCaucasus". Khona-ke uphase edolobhaneni Hay ngemva - Temryuk, Slavyansk-na-Kubani, ngemva kwalokho uyoba "yokugcina". Ephakathi kwamadolobha esiqokiwe kusenabantu amaphuzu ambalwa udinga ukushayela, landela umzila ecacisiwe.
Ngakho, ibanga Sevastopol - Krasnodar emgceni locondzile kancane, kodwa uma ushayela imoto noma ezinye izizathu zokuthutha, ke bayokhululwa kabili. Nokho, kukhona inketho ngawo ungathola ngokushesha okungaka. Futhi lokhu indiza. Kulokhu, indlela kuzothatha cishe isigamu ngosuku, kodwa kuphela kwamahora ambalwa. abalulekile nesikhathi yokonga. Kuze kube manje, umzila Krasnodar-Sevastopol ithikithi izindleko imayelana 11 000 ruble. Kodwa kukhona abanye abambalwa umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Intengo ithikithi incike ngesikhathi sokuthenga, kanye ngosuku ngesikhathi indiza. Empeleni, kukhona icushiwe isimiso esifanayo, okuyinto sisebenza Kwezinye izimo, lapho umuntu efuna ukuthola lolu noma kulowo muzi. Futhi lokhu - ithikithi ngokushesha uzobe uthenge, eshibhile kuzobiza. Yingakho abaningi ukuthole in a izinyanga ezimbalwa. Yiqiniso, zikhona izimo lapho akunakwenzeka ukubikezela uhambo. Kodwa uma siphela isidingo Kwaphakama angesabi fly ke ithikithi kuyodingeka ukuthenga ezibizayo. I ezingezinhle kakhulu ithengiswe izinsuku ezingu-14 ngaphambi kokuba ahambe aye futhi eduze usuku sokuhamba. Futhi okukhethwa iningi isabelomali kukhona amathikithi ne indiza ekuseni, futhi phakathi kwesonto.
Yiqiniso, izindiza indiza ngejubane, kodwa hhayi wonke umuntu ongakwazi ukulikhokhela. Abanye baya imoto, njengabo ibhasi. Krasnodar - Sevastopol - umkhuba ethandwa kakhulu. Abantu abaningi ukuthenga lezi amathikithi, ikakhulukazi kufunwe izindiza kusihlwa. Uhambo akubonakali eside ngoba isikhathi esiningi umuntu elele. Amabhasi kukhona induduzo letihloniphekile, ngakho amahora 13 Umuntu angazigwema zifike zime zithule futhi ukuza endaweni ngaphandle ubuhlungu emuva. Ngaphezu kwalokho, ithikithi lebhasi zingathengwa ehhovisi ithikithi esiteshini ibhasi noma ibhokisi ehhovisi oyi-yokuthengisa. Kungase kubonakale sengathi izindiza eside kangaka kuzo ngokuvamile kakhulu, kodwa lokho akulona iqiniso - nsuku zonke, emini, kukhona indiza yokuxhuma bebheke Sebastopol-Krasnodar. Futhi intengo ithikithi cishe izikhathi 9 aphansi uma iqhathaniswa indiza izindiza - ruble mayelana 1300.
Kuningi okuye kwashiwo mayelana travel ibhasi. Ngempela, kuba indiza ezithandwayo, futhi ikakhulukazi manje. Wonke umuntu ejwayelene simiso ithikithi elilodwa, okuyinto yethulwa esanda kutholakala. Ukuze uthole ithikithi elilodwa engafinyelelwa ukusuka kunoma yiliphi iphuzu we Russian Federation eCrimea. Ngakho, leli khadi kuhlanganisa travel ngesitimela Krasnodar, bese utshalwe umgibeli ebhasini bese uya isikebhe, okuyinto uyiswa nhlonhlo. Futhi kakade lapho egibela ibhasi kunoma komuzi YaseCrimea - .. Sevastopol, Yalta, Simferopol futhi Sevastopol, njll izinkomba, amathikithi Krasnodar Single kungabuye ithengwe, kodwa namuhla ngaphezulu funa namanje abasuka nezwekazi eCrimea. Lokhu, mangisho, kukho inzuzo kakhulu ngoba izivakashi akudingeki zenziwe ukucabanga ngokusebenzisa umzila - yanele ukuba ubheke cashier ukudayisa amathikithi futhi ukubhuka ithikithi elilodwa. Lokhu okuhlukile kuyinto isabelomali namuhla, njengoba intengo esemthethweni travel ku umzila Sevastopol - Krasnodar kuyinto ruble 830 kuphela. Yingakho amathikithi manje ezinjalo ubuthaphuthaphu e ngezinsuku ezimbalwa.
Uma inqubo yezokuthutha ngebhasi futhi ngendiza phezu uphawu, nesimiso ithikithi elilodwa akuyona yonke alungise, ngakho kufanele lona ukunakekelwa okukhethekile. Ngakho, isikebhe - kuba imodi eyinhloko ezokuthutha, wanqamula le Kerch Strait. Kodwa amaqembu ezinkulu ehlelekile izosebenzisa okuthiwa ngesivinini isikebhe, okungase abantu abangamakhulu amathathu. Kufanele kuqashelwe, kuvela elinye iqiniso. Kakade wayeka ukuhamba izitimela enhlonhlweni futhi ngokusebenzisa ensimini ka-Ukraine - konke ngenxa yokuthi isimo sezombangazwe. Kodwa ikhambi utholakale ngokushesha - futhi kungcono Isitimela Kerch. Yiqiniso, kuyobe sekuba i-nzima ukuthola, ngoba kufanele wenze inguquko ebhasini kuso iya ku Krasnodar, bese uthatha isitimela beya emzini lapho ufuna ukuza. Yebo, futhi umzila we hero-emzini Kerch ukuba isikhathi esincane esingaphansi ukubamba ngaphandle Sevastopol komgwaqo - Krasnodar. Isitimela isuka ngo 20:00 bese efika lesithupha ekuseni ngosuku olulandelayo. Ubude amahora 10. Kakhulu ukunqoba ibanga phakathi imizi emibili eseduze, kodwa iphephile futhi ivikelekile.
Yini izitshalo zasendlini angadingi ukukhanya ukukhetha?
Inyoni nge Crest ekhanda: ezinye zazo zitholakala ezweni lethu?
AkelPad - yini lolu hlelo? incazelo
Kuyini ihluzo ikhadi sekhompyutha
Likuphi Primorsk. Bangaki amadolobha igama, futhi zikuphi